Mourinho oo sheegay in kooxdiisa United ay nasiib xun tahay - BBC News Somali
20 Nofembar 2016
Image caption Mourinho ayaanan guuleysan lixdii ciyaar ee ugu dambeysay
United waxaa shalay laga hor istaagay guul ay ka gaari lahayd Arsenal oo Old Trafford marti ku ahayn ka dib markii Giroud oo bedel ku soo galay uu gool ka dhaliyay daqiiqadii 89-aad.
Goolkiisa Giroud wuxuu ciyaarta ka dhigay barbardhac ka dib markii bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta uu gool Man U u dhaliyay Juan Mata.
Mourinho wuxuu yiri: "Waxba kama sheegaayi ciyaartoydeyda, laakiin waxaan ku leeyahay waan ka xumahay sababtoo ah anaga waxaan dareemeynaa inaan guul dareysanay, Arsenal na waxay dareemayaan inay guuleysteen."
Wuxuu intaa ku daray: "Haddii aan eegno barbardhacyada aan la galnay Burnley, Stoke iyo Arsenal - waa sagaal dhibcood ee si fudud nooga fakatay. Haddii aan heli lahayn lixdaas dhibcood waxaan hadda ku dhowaan lahayn afarta koox ee ugu sareysa horyaalka."
"Dhammaanteen waan ognahay hadda inaan nahay kooxda ugu nasiibka xun Premier League". Ayuu sii raaciyay hadalkiisa, macallim Mourinho.
United waxay ku jirtaa kaalinta lixaad ee horyaalka, waxay sideed dhibcood ka hooseysaa kooxaha hogaanka hayso ee Liverpool iyo Manchester City, seddaxaad iyo afaraadna waxaa ku jira Chelsea iyo Arsenal.
Mourinho: Waxay ahayd inaan 6-0 ku badino
Tababarayaasha xaq ma u leeyihiin inay ciyaartoyda meel fagaare ah ku dhaliilaan?
20 Sebtembar 2016
Mourinho oo sheegay in Conte "Man U bahdilay"!